शरीरले धान्नै नसक्ने चिनी खुवाउँदो रहेछ कोकाकोलाले « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित
शरीरले धान्नै नसक्ने चिनी खुवाउँदो रहेछ कोकाकोलाले
३ कार्तिक २०७३, बुधबार ०७:१४
एजेन्सी । कोकाकोलाको स्वाद तपाईलाई कस्तो लाग्छ ? गर्मीमा चिसो कोक पिउँदा मज्जा त लाग्दो नै होला । कोकमा बेग्लै किशिमको गुलियो स्वाद हुन्छ । त्यो स्वाद भनेको चिनीलाई हल्का डढाएर तयार पारिन्छ । गुलियो भएपछि स्वतः त्यसमा चिनी हुन्छ । तर चिनीको मात्रा हुन्छ कति ?
समान्यतः हामी चिया पिउँदा हामीलाई एक चम्चा चिनी भए पुग्छ । धेरै चिनी खानु स्वास्थ्यको दृष्टिले अनुपयुक्त नै हो । पछिल्लो समय चिकित्सकहरुले चिनी, नुन र तेल भरसक नखानु, खाँदा पनि नाममात्रैको खानु भनिसकेका छन् । तर कोकाकोलाले हामीले पिउँने झोलमा यति धेरै चिनी हाल्दो रहेछ कि तथ्य सुन्दा त्यो कल्पना भन्दा पनि बाहिरको जस्ता लाग्छ ।
नेपालमा बोतल, क्यान, प्लास्टिकको जार आदिमा कोकाकोला बिक्री हुन्छ । युरोप अमेरिका तिर मगमा पनि कोक बेचिन्छ । जब बिबिसीमा कोकाकोला कम्पनीको युरोप अध्यक्ष जेम्स क्वीन्सीलाई सोधियो एक मगमा ४४ प्याकेट चिनी खुवाएर गर्न के खोजिएको हो ? अध्यक्ष क्वीन्सीले यो तथ्य आफूहरुले उपभोक्तामाझ नलुकाएको बताए । तर उनले यो भन्न सकेनन् कि यति धेरै चिनी खान आवश्यक छैन । आवश्यक भन्दा बढी चिनी खुवाउने कोक कसरी स्वस्थकर ? यो प्रश्न अहिले पेचिलो बनेको छ ।
(अध्यक्ष जेम्स र पत्रकारबीच भएको कुराकानीको नेपाली अनुवाद)
कोकाकोला पिउँदा शरिरलाई के फाइदा हुन्छ ?
कोकमा चिनी हुन्छ, त्यो शक्ति केन्द्र हो र अहिलेको आवश्यकता पनि । त्यसैले कोकको स्वादमा लाखौं मानिसहरु रमाउँछन् ।
कोकमा चिनी हुन्छ भन्नुभयो ? एउटा कोकको क्यानमा चिनी कति हुन्छ ?
क्यानको साईडमा सबै उल्लेख गरिएको हुन्छ । जस्तै ३५ ग्राम लेखिएको छ भने त्यो ६ चम्चा चिनीको मात्रा हुन्छ । हामी यही चाहन्छौ उपभोत्ताले सबै जानकारी लिउन् ।
२३ र ४४ प्याकेट चिनी त्यो पनि बढी भएन र ?
त्यही भएर यो जानकारी लेभलमा राखिएको हुन्छ । हामी यो कुरालाई लुकाउन चाहन्नौं कोकको भित्र के के हुन्छ भनेर । कोक जिरोमा चिनी हुँदैन । त्यसैले मानिसहरु आफै छनौट गरेर पिउँन सक्छन् ।
सानो मगमा २३ प्याकेट र ठूलो मगमा ४४ प्याकेट चिनी हुन्छ । यो मात्रा उपभोत्ताहरुले एकै चोटी प्रयोग गर्छन बढि भएन र ?
हामीले यो बुझ्न जरुरी छ की परिवर्तन आवश्यक छ । ठूलो मगको सट्टा सानो मग प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
प्रकाशित : ३ कार्तिक २०७३, बुधबार ०७:१४
arthabazar[email protected] (Marketing),